Kuedza Mobile Apps & Software: Epamusoro matambudziko anotarisana nemuedzi - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
"Kuedza", Mobile Applications, Mobile Apps, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Iyo mobile boom yakajeka uye yakajeka kuti ivo vari pano kuzogara. Iwo smart-mafoni anocheka-achinja achichinja kuita ekutanga maitiro ekubatana kwevatengi nemabhizinesi epasirese, nezviuru zvemapurogiramu ari kugadzirwa zuva nezuva. Nharembozha inoenda parutivi mafoni mafoni netafura. Zvirongwa izvozvi zviri kuiswa mumotokari, chikoro chinopfeka, uye midziyo yekugara
Kukura kunoshamisa kwemidziyo mbozha kwakaburitsa nzira dzemasangano kuti dzibatanidze mumhepo yemakomputa. Nhasi Mobile mafomu unza zvinobatika zvakaoma pa Mapuratifomu vane zviwanikwa zvekushandisa komputa. Kusiyana-siyana kunopa mutsauko matambudziko izvo zvinoda nzira dzekuyedza dzakasiyana. Muchikamu chino, tichanzwisisa pamusoro matambudziko kuti muedzi anotarisana nokuedzwa Mobile Apps uye software.
Zvinoenderana neCapGemini Quality Report (Mobile Testing), 18% yemafemu ari kupindura anoti ivo havana nguva yakakwana yekutarisa. Mobile Apps, uye 65% havana maturusi akakodzera. Zvakare, 52% inotaura kushomeka kwemidziyo sechikonzero chekusaita Mobile Testing. Saka pazasi takataura pamusoro matambudziko kuti muedzi anotarisana nekuedzwa Mobile Apps uye software.
Sezvo mashandisirwo emafoni ari kusimukira, vatengi vari kuwedzera kungwara nekushandisa foni. Ivo vari kushandisa mafoni avo kudhawunirodha mamwe emazuva ano maapplication, kuona mawebhusaiti, kuve anoshanda munzvimbo dzesocial system manejimendi, kutenga, uye zvakare kuchengetedza. bhizimisi kutaurirana. Sezvo kudiwa kwefoni kuri kuwedzera uye maitiro ekushandisa ari kuchinja, zvinotarisirwa kubva kunharembozha masisitimu ari kukura zvakare.
Kune akawanda mafoni ekushandisa masisitimu pamusika nhasi uye yega yega sisitimu yekushandisa ine akawanda dudziro. The multifaceted nature of bolstered Mapuratifomu yaenda kune imwe nhanho. Panguva yaunoita kuti app yako ienderane neKitKat, Lollipop yatovepo uye unotanga kunzwa mushumo weMarshmallow (unoona zvandiri kureva!).
Masangano anofanirwa kuona kuti maapps avo ndeechokwadi gadget agnostic uye anoshanda zvinoyemurika pane akasiyana masisitimu anoshanda uye mafomu avo. Iyi nyaya inowedzera kana paine dzakasiyana nhare mbozha uye mafomu avo anoedzwa
Huru hweMafoni Midziyo
Kupfuura 500m Android mano yakatumirwa kubvira Android 1.0, ingangoita 220m iOS zvishandiso akaendeswa kubva 2007. Idzi hombe nhamba yenhare mbozha kuwanikwa kubva pamafoni kuenda kumafoni, tabo, mapadhi uye tech inopfekeka inopa akasiyana siyana mamiriro ezvinhu anotarisana neyako nharembozha.
Kupfuurirazve, timu yemhando yepamusoro haigone kuvimbisa kuti kana chishandiso chakaedzwa chichiita zvinoyemurika pane rakapihwa gadget, richashanda zana muzana pane rimwe gadget zvisinei nekuti rinobva kumhuri imwechete yechinhu nekuti zvinangwa zvechiso, CPU, Memory, OS optimization, uye Hardware zvinogona kunge zvakasiyana.
Muna Kurume 2015, Tim Cook akazivisa kuti Apple yatengesa zvinopfuura mamirioni mazana manomwe ePhones zvachose. Zvinofungidzirwa kuti usati wapera 700 mabhiriyoni matatu eApple mafoni akatengeswa. Panguva iyoyo, pane Windows mafoni uye Blackberry zvakare. Kunyange isu tiine nhamba dzemhando dzakakurumbira, hapana zvakare kushomeka kwevatambi vemuno vazhinji vasingachagadziri mafoni matsva. Imwe neimwe fomu nyowani yefoni pamwe inofambidzana neimwe saizi saizi.
Kutenda shanduko inoshanduka yemaitiro, vatengi vari kuchinjika uye nekuita zvakasarudzika kune shanduko yesaizi. Masangano nhasi haasati ave nesarudzo yetweak yavo Mobile Apps chimiro uye hunhu hwekuenderana nefoni nyowani uye ramba uchipa zvakasarudzika mutengi ruzivo kune vese vatengi kune akasiyana mafoni emafoni uye masikirini masizi. Kune yega yega jogirafi, kusarudzwa kunodiwa kwemidziyo kwakasiyana uye nekudaro iwe unogona kuve nesarudzo yekuvhara 90% yeako vatengi veapp kuburikidza nemhando dzakasiyana-siyana dze5-6 mafoni.
Kunyange zvakadaro, kana iwe uchifanira kuyedza zvakasiyana Mobile Apps kupa kune vakasiyana siyana vateereri munzvimbo dzakasiyana dzenzvimbo, kana yako mobile app kuyedza lab ine chete 7-8 zvishandiso, kutora gander kune yakakura smartphone musika, iwe unenge uri kufukidza chete 25% yevatengi vako.
Vakasiyana Mobile App Mhando
Iyo nharembozha inogona kuve yemuno app, webhu webhu kana hafu nehafu app ine izvo zvinhu zviviri. Kuedzwa kwemhando yega yega yeapp kwakasiyana pane kumwe sezvo kuitisa kwavo kwakasiyana zvakanyanya kubva kune mumwe. Sezvo isu tichiona yega yega maitiro maitiro kubva pakuisirwa kusvika kugona inoshamisa kubva kune mumwe nemumwe, isu tinonzwisisa kuti kwavo kuyedza uye kuyedza kufukidza kuchave zvakare kwakasiyana. Kuti uwane rumwe ruzivo nezvazvo, unogona kureva kune iro Rinotangira Gwara kune Mobile Kuyedza
Hupenyu hwebhatiri kwave kuri kunyunyuta kukuru kwe smartphone vatengi uye mbozhanhare vatengi vane zvakasarudzika zvinobata nezve foni bhatiri hupenyu. Imwe neimwe smartphone mugadziri ari kurwira kuti akwanise kuita nekukurumidza, kutamba zvirinani, kuona vhidhiyo zvichingodaro apo uchipa hupenyu hwakareba hwebhatiri. Pamusoro peizvi, pane mukana wekuti chero chirongwa chinowedzera kudhonza bhatiri, panguva iyoyo, vatengi havazeze kusunungura maapplication akadaro. Nepo vagadziri veapp vachida kutora mashandisirwo ebhatiri, iriwo basa revanoyedza kuti vaone kuti kunze kwemaficha eapp, usability, uye kugadzikana, ivo vanoedza maapplication ekushandisa simba zvakare.
Nzvimbo Dzakawanda dzeKuyedzwa
Nharembozha emulators uye simulators chinhu chakakosha kuyedza zvishandiso uye zvinotigonesa kusimbisa zvakajairika mashandiro uye kuita yakajairwa Regression Kuedzwa. Hunhu chaihwo hwevamiririri uye simulators zvinoreva kuyedzwa kuri kutungamirwa mumamiriro asiri echokwadi. Zvakanakira zvishandiso zvakadaro zvinorambidzwa pachiyero, uye hazvifanirwe kumboonekwa sekutsiva chenyika-chaiyo. Kushandisa emulators uye simulators muchiyero pamwe ne-mu-musango kuyedzwa kuchakupa iwe zvakanakira mhedzisiro.
Zvigadzirwa zvefoni inofanirwa kuverengera kune yakaganhurirwa uye inochinja system bandwidth. Chokwadi, kunyangwe iyo yakagovaniswa nharembozha inogona kuve nekukanganisa kwakakosha pakuita kweapp. The Mobile Apps vatengi havana moyo murefu zvakanyanya nekuita kuri pakati nepakati. Tsvagiridzo yakaitwa neThe Aberdeen Group yakaratidza kuti vanosvika makumi maviri neshanu muzana evatengi veapp vanosiya nharembozha kana vachinge vaona kunonoka kweanopfuura masekondi matatu. Kuyedzwa kwekuita chiitiko chehunyanzvi chinosanganisira kuyedzwa kwezvinhu zvakawanda, semuenzaniso, kushandiswa kweCPU, kushandiswa kwendangariro, kuwanikwa kwecache, kudonha kwendangariro neapp, kushandiswa kwedata rewebhu, kushandiswa kwedata pasina Indaneti, caching, uye nzendo dzinoverengeka ikoko. uye shure uye zvichingodaro.
Mhando dzakasiyana dzekuyedza Maturusi
Kupfupikisa iyo inotyisa yakawanda yakasarudzika hunhu hwe mobile bvunzo kushandisa michina, zvishoma nezvishoma zvishoma nezvishoma, kunotyisa ndiko kuwanikwa kukuru kweyedzo yenharembozha automation maturusi mumusika. Yemahara/Kubhadharwa. Zveapp yemuno kana yewebhu app? Ye Android kana iOS, saka ndeipi iyo kushandisa michina chiridzwa chebvunzo yako yefoni kushandisa michina zvinodiwa, kana kubvunza kuri - Pane imwe yega mudziyo weMobile Test yedu kushandisa michina zvinodiwa?
Isu sehuwandu tinoramba tichiverenga anecdotes nezve saiti kubiridzira uye kudonhedza dhata. Masangano ari kuyedzawo kuvimbisa apps chengetedzo. Stats inokurudzira kuti inopfuura hafu yemapurogiramu haatore matanho akakwana achiburitsa ruzivo rwakasimbiswa nezvechishandiso kana vatengi uye akawanda maapplication haana hunyanzvi hwekunyorera. Mobile app testers inofanirwa kuve nekunzwisisa kwakadzama kwe chibatiso kuedzwa.
Aya mahombe manhamba ekuwanikwa kwemidziyo yenhare kubva pamaoko kusvika kumafoni, kusvika kumatabo, kusvika kumapedhi uye inopfekwa tekinoroji inopa akasiyana siyana mamiriro anotarisana neapp yako yenhare. Nekudaro, kana iwe uchifanira kuedza zvakasiyana Mobile Apps kupa kune vakasiyana siyana vateereri munzvimbo dzakasiyana dzenzvimbo, kana yako mobile app kuyedza lab ine chete 7-8 zvishandiso, kutora gander kune yakakura smartphone musika, iwe unenge uri kufukidza chete 25% yevatengi vako.
Mhando dzakasiyana dzeApple App Mhando yefoni app inogona kuve yechizvarwa app, webhu webhu kana hafu nehafu app ine izvo zvinhu zviviri. Nepo vagadziri veapp vachida kutora mashandisirwo ebhatiri, iriwo basa revanoyedza kuti vaone kuti kunze kwemaficha eapp, usability, uye kugadzikana, ivo vanoedza maapplication ekushandisa simba zvakare.
Iko kuyedza kwekuita chiitiko chehunyanzvi chiitiko chinosanganisira kuyedzwa kweakawanda maficha, semuenzaniso, CPU mashandisiro, kurangarira kushandiswa, cache kukura kuwanikwa, ndangariro leakage neapp, webhu kushandiswa kwedata, isingaenzaniswi dhata, caching, uye dzinoverengeka nzendo ipapo uye kumashure uye zvichingodaro.